Kooxda Al-Shabaab Oo Sheegay In 73 Askari Ku Dileen Weerarkii Ay Ku Qaadeen Laanta-Buuro |
Kooxda Al-Shabaab Oo Sheegay In 73 Askari Ku Dileen Weerarkii Ay Ku Qaadeen Laanta-Buuro
Muqdisho(GNN) Al-Shabaab ayaa sheegatay in illaa 73 askari ka tirsan ciidamada dowladda ku dileen weerar culus oo xalay ku qaadeen xerada laanta Buuro, kadib markii dagaalyahanadeeda ay dhowr jiho ka weerareen.
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegay in dhamaan askartii ku jritay xeradaas ay laayeen, isagoo intaa ku daray inay qabsadeen illaa sagaal gaari oo 7 ka mid ah ay ahaayeen gaadiid dagaal, halka mid kalena ay gubeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaadiidka al-Shabaab ku qabsatay weerarkii xalay laga gudbiyay degmada Awdheegle oo Al-Shabaab gacanta ku heyso.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay inay dib u caabiyeen al-Shabaabkii soo weeraray, isla markaana si buuxda gacanta ugu hayaan xerada.
Warar madax banaan ayaa sheegaya inuu jiro khasaare baaxad leh oo gaaray ciidamada milateriga Soomaaliya, iyadoo tirada dhimashada ay ka badan tahay labaatameeyo.
Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana weeraradaas ay noqdeen kuwo khasaare xoogan ka soo gaaray ciidamadaas.